Iminyaka emihlanu entolongweni yaseJamani ngeziqinisekiso zomgunyathi ze-COVID-19
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseJamani zokuPhula » Iminyaka emihlanu entolongweni yaseJamani ngeziqinisekiso zomgunyathi ze-COVID-19
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • ulwaphulo-mthetho • Iindaba zaseJamani zokuPhula • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • iindaba • abantu • Xanduva • Safety • Shopping • Technology • Tourism • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Iminyaka emihlanu entolongweni yaseJamani ngeziqinisekiso zomgunyathi ze-COVID-19.
Ukwenziwa kunye nokuthengiswa kwezatifikethi zomgunyathi ze-COVID-19 ziye zaba lishishini elikhulayo lentengiso emnyama eJamani.
Amanani e-COVID-19 eBerlin abethe ixesha eliphezulu ngoLwesine ophelileyo, ngama-2,874 amatyala amatsha axeliweyo ngolo suku.
IPalamente yaseJamani iza kuthatha isigqibo malunga nemithetho emitsha echasene ne-COVID-19 ngalo Lwesine.
Ukuqala ngoMvulo, ukuba nogonyo lwe-COVID-19 okanye isatifikethi sokubuyisela kufuneka ungene kwiindawo zokutyela, iicinema, iithiyetha, iimyuziyam, iigalari, amadama okuqubha, iindawo zokuzilolonga, kunye neendawo zokulungisa iinwele kunye neesaluni zobuhle eBerlin.
I-Bundestag (iPalamente yaseJamani) isetiwe isigqibo malunga nemithetho emitsha echasene ne-COVID-19 ngomso, nangona uyilo sele lukhutshwe kumajelo eendaba.
Njengoko urhulumente wobumbano wexesha elizayo waseJamani ejonge ekuqiniseni izikrufu kubhubhane, abantu benza kwaye besazi besebenzisa. izatifikethi zokugonyelwa i-COVID-19 zomgunyathi kungekudala angajongana neminyaka emihlanu entolongweni.
Iziphumo zovavanyo olungeyonyani lwe-COVID-19 kunye nezatifikethi zokubuyiselwa kwe-coronavirus ziya kuwela phantsi kwecandelo lolwaphulo-mthetho olufanayo, kunye nezohlwayo ezifanayo zabo bakhohlisayo kunye nabanini.
Yonke into ecetywayo kwimimiselo emitsha yabhalwa yi-Social Democrats, kunye ne-Free Democratic and Green Party. La maqela mathathu ngoku akwiingxoxo zomdibaniso kwaye kulindeleke ukuba aseke urhulumente omtsha waseJamani kwangoko kwiveki ezayo.
Ukwenziwa kunye nokuthengiswa kwezatifikethi zomgunyathi ze-COVID-19 ziye zaba lishishini elikhulayo lentengiso emnyama eJamani. Kwimeko enye nje enjalo exelwe nguDer Spiegel ngasekupheleni kuka-Okthobha, umgunyathi osebenza kwikhemesti eMunich kunye neqabane lakhe livelise ngaphezulu kwama-500. izatifikethi zedijithali zomgunyathi kwisithuba senyanga enye, ireyitha kwi-€350 nganye ethengisiweyo.
Ngelo xesha, Berlin Abasemagunyeni besixeko baceba ukuqhubela phambili ukuqinisa izithintelo kwikomkhulu laseJamani, apho, ukuqala ngoMvulo, ukuba nogonyo okanye isatifikethi sokubuyisela kufuneka ungene kwiindawo zokutyela, iicinema, iithiyetha, iimyuziyam, iigalari, amadama okuqubha, iindawo zokuzilolonga, kunye neendawo zokulungisa iinwele. kunye neesaluni zobuhle.
Ngolwesibini, Berlin USodolophu uMichael Müller uqinisekisile ukuba abasemagunyeni besixeko bafuna "ukuba nesixhobo esongezelelweyo" sokuqulatha ukusasazeka kwe-COVID-19.
Nangona kunjalo, usodolophu wala ukucacisa ukuba ayakuba yintoni na amanyathelo amatsha.
Imithombo yeendaba yalapha ekhaya iqikelela ukuba ukuqala kwiveki ezayo, ukongeza kwimfuno yogonyo okanye isatifikethi sokuphinda ungene kwiindawo zikawonke-wonke, abantu abangaphakathi kwezo ndawo kuya kufuneka baziqhelanise noluntu kwaye banxibe imaski, okanye babe neziphumo zovavanyo ezibi.
Yonke imimiselo emitsha yesixeko kunye nezithintelo ziza emva kwamanani e-COVID-19 Berlin ibetheke kakhulu ngoLwesine ophelileyo, nge-2,874 yamatyala amatsha osulelo lwe-coronavirus axelwe ngolo suku.
Novemba 18, 2021 kwi-04: 56
Ukwenziwa kunye nokuthengiswa kwezatifikethi zomgunyathi ze-COVID-19 ziye zaba lishishini elikhulayo lentengiso emnyama eJamani. Umkhosi wamapolisa waseJamani useke iqela elikhethekileyo lokulwa imarike ekhulayo emnyama kwiziqinisekiso zokugonya ezibunjiweyo. Oko kubhalwe kwi-Europol, i-arhente yamapolisa ye-European Union.